अङ्गुर कसरी रोपेर गर्न?
छुट्टी बजार मा अङ्गुर खरीद, हामी यस स्वादिष्ट बेरी मात्र न्यानो दक्षिणी देशहरूमा बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। केही मानिसहरूले यसलाई आफ्नो बीचको सडक खण्ड मा, रूस मा बढ्न सम्भव छ भनेर थाहा छ, र यो गुणस्तर दक्षिणी भाइ उपज छैन। तर तपाईं अङ्गुर कसरी रोपेर गर्न जान्नु आवश्यक छ।
बेरी, यो उब्जाउ गरिन्छ जब रसायन बिना सक्दैन, त्यसैले तातो जलवायु उब्जाउ, ट्रपिकल रोगहरु को हार उजागर र। आज त्यहाँ किरा विरुद्ध सुरक्षा, दक्षिणी अर्थव्यवस्था थप कुशल प्रयोग "भारी" रसायन धेरै को एक जैविक हालतमा छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद।
आफ्नो परिवारको रस र रक्सी यो फल देखि लागि प्रदान गर्न, रूसी cottagers अङ्गुर कसरी रोपेर गर्न जान्नु आवश्यक छ। लोकप्रिय विश्वास विपरीत, यो कटेज मा हुर्केका अन्य बाली भन्दा बढी हेरविचार लाग्छ।
धेरै capricious बोट र समस्या संग धेरै - को पाठ्यक्रम, को दुःखी कुरा गर्मी बीच बासिन्दा को राय छ कि दाखको बोट को हो भन्ने छ। यस्तो त्रुटिहरू कसरी अङ्गुर रोपेर र ठीक उहाँलाई पछि हेर्न बारेमा बुझ्न जानकारी कमी रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ यो stems। यो बोट बढ्न निर्णय गर्ने एक व्यक्ति, अक्सर यो कुरा मा प्रो बन्ने, र नयाँ प्रजातिहरू प्रकार निर्णय गरे।
जंगली अङ्गुर मा रूखहरू लचिलो शाखा लपेटन, को जंगल मा बढ्न। यस कारण लागि आधुनिक खेती विशेष उपकरण ब्याकअप चाहिन्छ।
अङ्गुर झाडी फरक बलियो जराको छ। तपाईं दाखको बोट रोपे गरेपछि Fruiting तेस्रो वर्ष सुरु हुन सक्छ। एक विशिष्ट सुविधा भएको दाखको बोट यसलाई धेरै वर्ष को लागि बाली उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने छ। केही प्रजातिहरू राम्रो बढ्दै अवस्थामा सुन्दर bunches सय वर्ष खुसी छन्।
देश मा अङ्गुर बढ्न
यो फल को खेती, अर्को 7000 वर्ष पहिले लिन्छ जोरजियन viticulturists भनेर थाह रोचक हुनेछ। यसबाहेक प्रमाण - अङ्गुरको तस्बिरहरूको साथ पुरातन जार को टुकडे।
रूसी माली वसन्त र शरद ऋतु मा रोपेर। र वास्तवमा, दुवै अवस्थामा, आफ्नो लाभ छ।
तपाईं वसन्त मा बोटहरू रोपेर निर्णय भने, माटो शरद ऋतु देखि तयार गर्नुपर्छ। को दाखको बोट धेरै वर्ष को लागि एक ठाउँमा बढ्न कि हुनेछ, त्यसैले राम्रो सबै गर्न प्रयास सम्झना।
प्रश्न गर्न "अङ्गुर कसरी रोपेर गर्न" विशेषज्ञहरु जवाफ - यसको तन्तु पलायो छन् अघि यो गर्नुपर्छ। ब्रश राम्रो सूर्य द्वारा रोशनी र भवन पर्खाल वा हरियो plantings को चिसो हावा बाट सुरक्षित छ एक क्षेत्र पङ्क्तिहरू मा लगाए। पंक्तिहरूको उत्तर र दक्षिण निर्देशित गर्नुपर्छ। सूर्य सबै दिन सबै पक्ष मा ब्रश illuminates रूपमा यो प्रवृत्ति, कुनै संयोग छ। तपाईं को लागि wetlands र नुनखरा soils मा soils भनेर थाहा हुनुपर्छ अङ्गुर रोपण उपयुक्त छैन।
यसलाई अझ राम्रो खुसीले गदगद छ, र हावा शासन गर्ने जरा गर्न अनुकूल सुनिश्चित भनेर जहाँ तपाईं अङ्गुर रोपेर योजना ठाउँ, मा भूमि, छाडा हुनुपर्छ।
ब्रश को रोपण लागि 50 सेमी को राम्रो गहिराई र 60 सेमी को एक चौडाई खन्नुहोस् गर्न।
पिट को गिरावट बराबर रकम तिनीहरूलाई लिएर, धरण, तरकारी बगैचा माटो, बालुवा र ठीक रोडा भरिएको छ देखि। प्वालहरू superphosphate र बनाउन पोटासियम सल्फेट। यी मल2को अनुपात: 1। प्रत्येक प्वाल मा superphosphate को 400 ग्राम र तदनुसार, 200 ग्राम हालिएको छ पोटासियम सल्फेट को।
लगभग संयंत्र अङ्गुर अघि एक हप्ता बाहिर बिरुवा बनाउन थाल्छन्। यो तिनीहरूले कम चिस्यान प्रयोग प्राप्त सुनिश्चित छ। सडक मा बिरुवा को छाया हुनुपर्छ। राति, कोठा मा उनलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्। रोपण अघि superfluous मार कटौती गर्नुपर्छ। तपाईं खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले kilned को जरा, त्यसपछि तपाईं एक वा दुई दिन को लागि पानी मा बिरुवाहरु राख्नुपर्छ याद। तुरुन्त2को अनुपात मा माटो र मल को Mash तिनीहरूलाई डिप रोपण अघि: 1।
दस दिन रोपण पछि, को अङ्गुर पानी प्रति राम्रो पानी बाल्टिन को दरमा। को ब्रश को सबै भन्दा राम्रो वृद्धि हुनुपर्छ लागि समय समयमा जमीन loosen। अगस्ट, तिनीहरूलाई पानी छैन, यसलाई मार को गठन को लागि महत्वपूर्ण छ।
अङ्गुर लगाए र cuttings सही प्रजातिहरू स्वस्थ ब्रश तपाईं प्राप्त गर्न सकिन्छ। Cuttings को दाखको बोट काट्न छन्, तिनीहरूले कम्तिमा 3-4 तन्तु हुनुपर्छ। हिउँदमा, तिनीहरूले नम बालुवा मा एक तहखाने मा राख्नुपर्छ। वसन्त तिनीहरूले छाडा माटो संग र तयार खुला जमीन मा बिरूवा rooting पछि प्लास्टिक बोतल रोपिन्छ। शरद ऋतु रोपण बोटहरू को मामला मा, तपाईं चिसो बाट सुरक्षित आश्रय तिनीहरूलाई प्रदान गर्न आवश्यक छ।
कसरी एक घर गुलाब हेरचाह गर्न
"क्रिमसन घन्टी '- प्रारम्भिक-पकने टमाटर। विविधता, हेरविचार र खेती को विवरण
एक व्यापार रूपमा मशरूम बढ्दै: समीक्षा र सुझावहरू
बढ्दै Ornamental shrubs: Hydrangea paniculata grandiflora
बर्च टार: बागवानी मा आवेदन
अंगूठियहरुको 'Aragorn अभिनेता Viggo Mortensen को "प्रभु राजा
पाँच तरिका: बदला मान्छे रूपमा
के छाती दुखाइ भने?
11 हप्ता गर्भवती
गर्भावस्था को समयमा Chamomile: सुझाव, व्यञ्जनहरु, contraindications
Anatoliy Tymoschuk: जीवनी, पेसा र रोचक तथ्य
जीवनी किम Kardashian: एक सोशलाइट जीवित कसरी छ
उज्बेकिस्तान Mirziyaev Shavkat Miromonovich को प्रधानमन्त्री: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य
दबाइ 'Nurofen' (बच्चाहरु को लागि सिरप)। निर्देशन
मास्को टंकशाला, उत्पादनहरु
भेनस बीच पेपहस5* (पेपहस, साइप्रस): होटल को विवरण र समीक्षाहरू